Pattern89: Ahịa AI Software maka Mgbasa Ozi Dijitalụ Gị | Martech Zone
Pattern89: Ahịa AI Software maka Mgbasa Ozi Dijitalụ Gị
Fraịdee, June 21, 2019 Fraịdee, June 21, 2019 Douglas Karr
Afọ abụọ mgbe ha bidoro site na studio Alfa dị elu, Ikpo okwu AI nke Pattern89 na-agbaputa ngwa ngwa ohuru maka ngwa ahia Facebook, Instagram na Google.
Ternkpụrụ ahịa ahịa ahịa nke AI nke 89 jikọtara ike igwe mmụta na data mgbasa ozi a na-enwetụbeghị ụdị ya. Ọ na-achọpụta ma nyochaa usoro data ga-eme ka nsonaazụ mgbasa ozi dị mma. Nyocha data a mgbe niile na-eme ka mgbasa ozi dijitalụ nke akara ngosi dị elu ma dị elu maka arụmọrụ.
Site na mwepụta nke bọtịnụ "Mee Nke a Maka M", Pattern89, na-eme ka mgbasa ozi dijitalụ na-aga nke ọma dị mfe- ma mara karịa karịa. Njirimara ya gụnyere:
Ihe Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
AI nke a gosipụtara na-enye ndị mgbasa ozi kacha mma nghọta mgbasa ozi ọha na eze n'ihi na ọ nwere ohere ịnweta data kachasị. Kwa ụbọchị, ọ na-enyocha ihe karịrị puku abụọ, narị itoolu nke mgbasa ozi ndị ahịa ọ bụla, yana ọtụtụ ijeri ihe data mgbasa ozi ndị ọzọ. Nchọpụta miri emi, kwa ụbọchị na-ebupụta mmelite kachasị mma na oge maka mgbasa ozi Facebook na Google.
E nyefere Optimizations dị ka mata
AI na-achọta usoro dị oke mkpa na data nke mgbasa ozi ma chọpụta otu esi eji usoro ndị ahụ iji bulie arụmọrụ mgbasa ozi. Ọ na-anapụta ndị a mmelite dị ka Alerts kwa ụbọchị, yabụ ha nwere ike ịnweta mgbasa ozi oge niile na-arụpụta ezigbo nsonaazụ.
The Ihe okike nyochaa otutu puku ihe elere anya site na mgbasa ozi nke obula ma gosiputa ihe okike- gunyere oyiri, agba, onyonyo, mmegha ihu, na karie ndi mmadu ka ha ruo ebumnuche omenala.
“Mee M Nke a” Button
Na aga iji chekwaa ndị mgbasa ozi karịa oge, Pattern89 etinyego nso nso aMee Nke A Maka M”Bọtịnụ. Ọ na-akpaghị aka implements na mbụ ntuziaka optimizations nwere ike iri awa kwa izu iji wuchaa.
Na ha abụọ ụdị na ụlọ ọrụ ịchọta ihe ịga nke ọma na ikpo okwu AI ha maka ndị mgbasa ozi, Pattern89 na-enye nnwale izu abụọ n'efu.
Malite Ọnwụnwa Free Gị
Tags: ad aad nyochaaiAmamịghe echichedijitalụ adnnwale dijitalụnwereelu alphaoctivquantifimkpọkọta
Douglas Karr Friday, June 21, 2019 Friday, June 21, 2019
Na-enweghị atụ ụjọ
Promo.com: Onye nchịkọta akụkọ vidiyo dị mfe na ntanetị maka Social Media Videos na Mgbasa Ozi